That's so good, right?: March 2014
Posted by Alex Aung at 5:53 PM No comments:
Email to my online lover: Part 2
မနက်ခင်း ခပ်စောစောလေးထရတာ လန်းဆန်းနေတာပဲ။ အကုန်လန်းနေတာဗျ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူရှိနေလဲ မှန်းကြည့်။ ချစ်လေး အဆင်ပြေပါစေလို့ကိုက ဆုတောင်းနေတာတော့အမြဲပဲ။ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ အမြဲအဆင်ပြောနေသလိုပါလေ။ ဒီမှာ တော်တော်အေး နေတုန်းပဲကွ….ရေခဲမှတ်အောက် ၆ ဒီဂီရီလောက်ရှိတယ်။ အိပ်ရာပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းလှည်းအိပ်နေဆဲ….ချစ်အကြောင်းတွေးရင်း ဆိုပါတော့။ ကိုယ်ဘာလုပ်သင့်လဲ မတွေးတတ်ဘူး..။
တကယ်လို့သာ ချစ် ကိုယ့်အနားရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်မိနေမလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်။ မနက်စောစော အိပ်ယာက ချစ်ထက်အရင်ထ မယ်၊ ချစ် အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းပြီး အိပ်စက်နေပုံလေးရယ် အသက်ရှူကာ ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်လုပ်နေပုံလေးတွေရယ် စက္ကန့်တိုင်းကို စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ မထိန်းနိုင်ဘူးကွာ…တဆတ်ဆတ်ခုန်နေတဲ့ ချစ် လည်ပင်းက သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေး.. ကို အဦးဆုံး ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ တို့ထိ…ပြီးတော့ ရင်အုပ်….နောက်တော့ အံစာတုံးဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်သားလေးတွေကို နမ်းမယ်… နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းမတ်လာတဲ့ ချစ်ရဲ့ငပဲဆီ နေရာပြောင်းမှာပေါ့။ ချစ်က ခပ်တိုးတိုးညည်းညူရင်း နိုးထလာမယ်…ပြီးတော့ “ကို… ဘာလုပ်နေတာလဲ” မေးတော့မှာ။ အဲဒီ့အခါ ကိုယ်က ချစ်ငပဲကို-ုပ်ပြုနေတာကိုရပ် လက်ကတော့ဆက်လက်ကစားရင်း ချစ်ရဲ့နှုတ်ခမ်း ပြည့်ပြည့်လေးကို အနမ်းကြောရှည်ဆက်မပေါ့နော်။ ကိုယ်တို့တွေခဏတော့ ဒီအဖြစ်မှာသာယာနေကြမှာ…ယောက်ျားချင်းချစ်ကြတဲ့ အဖြစ်။
ခပ်လျော့လျော့ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ချစ်ကိုယ်ပေါ်ကို ကိုက တွားတက်…..ကျောင်ပြင်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်ရင်းခဏတော့ ပွေ့ ဖက်ရသေးတာပေါ့။ နောက်တော့…ချစ်ခါးစပ်နားမှာ ခေါင်းအုံးကိုခပ်မြင့်မြင့်ခုလိုက်တာ တင်ပါးလေးက အပေါ်ကိုမြောက်တက် လာ ကာ….ပေါင်တံတွေကို ချဲလိုက်တော့ ခရေ၀လေး ကို့လျှာတစ်ချောင်းလုံးတိုးဝင်ကစားဖို့အသင့်ဖြစ်ကရော။ ခပ်စုစုဖြစ်နေတဲ့ ခရေ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လက်ချောင်းထိပ်ဖျားလေးတွေနဲ့ အသာအယာဖြဲလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းနဲ့ အနမ်းပေးလိုက်တယ်….ချစ်သုံးထား တဲ့ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်နံ့သင်းသင်းလေးက မဆိုးဘူး….လျှာတစ်ချောင်းလုံးကို နှုတ်ခမ်းသားတွေထဲကနေထုတ် ခရေ၀အနှံ့မွှေပစ်လိုက် တာ အရသာကလည်းမဆိုးဘူး….သွေးကြောတွေကို တဆတ်ဆတ်ခါသွားစေသလိုပဲ ….Love it…
လက်ညိုးနဲ့ လက်ခလယ်နှစ်ချောင်းပူးကို lube နည်းနည်းသုတ်လိမ်းရင်း ချစ်ရဲ့ man pussy ထဲကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းလေးလျောသွင်းလိုက် တော့ ချစ်ဆီက ညည်းညူမိန်းမောသံထွက်လာတာ ကိုယ့်ရင်ခုန်သံကိုပိုမိုမြန်စေသလို….လက်သူကြွယ်အပါအ၀င် သုံးချောင်းထည့်လိုက် တော့ တရှီးရှီးနဲ့ ဖီးလ်တက်သံကပိုကျယ်လာတယ်။ ချစ်ရဲ့နောက်ပေါက်တစ်ဝိုက် lube ကောင်းကောင်းရွှဲသွားတော့ ကိုယ်လည်း ၆ လက်မ ကျော်မယ့် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုယ် lube ရွှဲရွှဲလေးသုတ်လိုက်ကာ condom ခပ်ပါးပါးလေးတစ်ခုစွပ်လိုက်တယ်လေ…ကြိုက် တယ်ဟုတ်။ လမ်းကြောင်းချောအောင်လုပ်ထားတာတောင် ချစ်ရဲ့ခရေ၀က ကိုယ့်ငပဲခပ်တုတ်တုတ်ကို သွင်းလို့မရချင်သေးဘူးနော်။ တထစ်ခြင်း တထစ်ခြင်း….တစ်ချောင်းလုံးအဆုံးထိသွင်းလိုက်ပြီးမှ ချစ်ကိုယ်ပေါ်ကို မှောက်ချပြီးငြိမ်နေလိုက်ရင်း ပျော့ပျောင်းလှတဲ့ ချစ်ခြေထောက်တွေကို ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်တင်လိုက်တယ်လေ ဒါမှ ကိုယ့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အဆုံးထိဝင်မှာ။ မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး…..ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပခုံးနှင့်ထမ်းပိုးလိုက်ခြင်း။ အသွင်းအထုတ် ခပ်မြန်မြန်မလုပ်ဘဲ မွှေနေပြန်တော့ ချစ်က…အဲ့လို အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ….လုပ်ပါ လုပ်ပါတော့လို့တောင်းဆိုတော့မှ ကိုယ်က တစ်ချက်ခြင်း အသွင်းအထုတ်စလုပ်ဖြစ်တာ။ တစ်ချက်ခြင်း ခပ်နင့်နင့်လေး ဆောင့်ဆောင့်သွင်း ချစ်ကလည်း ကျောပြင်ကိုကော့တက် မျက်ဖြူတွေလန်တဲ့အထိ ဖီလင်တွေတက်ကြတာ မိုက်တယ်။
အို….လုပ်နေရင်း လုပ်နေရင်း ကိုယ့်စိတ်ထဲ tempo အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပြီလို့ခံစားရတာကလည်း ကိုယ်က ချစ်ရဲ့ခရေ၀ထဲ ငပဲကို ခပ်ပြင်းပြင်း ဆက်တိုက် သေနတ်ပစ်သလို သွင်းနေတာကြောင့်လည်းပါမယ်။ ဘယ်လိုမှ..ဘယ်လိုမှလည်း ပြန်ထမ်းလို့မရတော့ဘူး ဆိုတော့ ချစ်ရဲ့ man pussy ထဲကို ကိုယ့်ရဲ့ love juice တွေကိုဖြည့်ပစ်လိုက်တယ် လျှံကျလာတဲ့အထိ။ ကိုယ့်ငပဲထဲက သုက်ရည်တွေ တစ်စက်ကျန်တဲ့အထိ တစိမ့်စိမ့်ထည့်တာ နှစ်ယောက်သား ဖက်ပြုနေတဲ့အနေအထားနဲ့ကိုအကြာကြီးပါပဲ။
ချစ်ကတော့ ပြောတာပဲနော် ကိုယ်တို့တွေ တစ်သားထဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကိုယ်တို့တွေ ဖီလင်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ တစ်ယောက်တည်းလိုကိုဖြစ်လို့။ ကိုယ်လည်း ချစ်ကိုယ်ပေါ်မှောက်ပြီးငြိမ်နေရာကနေ နံဘေးကိုလှိမ့်ချပြီး ခဏတော့ နားလိုက်သေးတယ် နော်။ ကိုယ်တို့နှုတ်ခမ်းတွေ ဂဟေဆက်လိုက်ကြပြန်တာ တော်တော့်ကိုမွတ်သိပ်တရှိုက်မက်မက်ပေါ့….ပြီးတော့ ချစ် ငပဲကို စမ်းကြည့် လိုက်တော့ မာတောင့်နေဆဲဆိုတော့ ကိုယ်လည်းမလုပ်တတ်လုပ်တတ်နဲ့ blowjob လုပ်ပေးတာ တော်သေးတယ် သွားနဲ့မငြိတာ။ ခဏတာ ရေခဲချောင်းကိုစုပ်မျိုသလို ကိုယ်ပြုစုကြည့်လိုက်တော့ ချစ်လည်းသိပ်မထိန်းနိုင်ပါဘူး ပါးစပ်ထဲလျှံကျသွားတာပဲ အများကြီး သုက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တာပါ။ ကိုယ်လည်းပြီး ချစ်လည်းဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ် နှစ်ဦးသား တစ်သားတည်းကိုဖြစ်လို့။
Alex Aung (7 March 2014)
Posted by Alex Aung at 10:28 AM 1 comment:
Land of Cherry
'သော်ဇင်ဟိန်း' ဆိုလျှင် ဆေးတက္ကသိုလ်လောကမှာ မသိသူမရှိ လောက်အောင်ပင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေက တော့ 'သော်သော်'လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းမှန်မှန်တက် စာမေးပွဲမှန်မှန်အောင်ကာ အခုဆိုလျှင် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ နောက်ဆုံးနှစ်ပြီးသွား၍ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာ ဟောက်စ်ဆာဂျင်လုပ်နေပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ စာလည်း တော်နေလေတော့ ဆရာများနှင့် အခြားကျောင်းသားများရဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်ဗျ။ နောက်.... တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်လည်း လူအများဂရုစိုက် ကြလေသလားမသိ။ မိဘများ ကလည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ ဖြစ်သည့် အလျောက် သားအငယ်ဆုံး ကျွန်တော့်မှာ တစ်စုံတစ် ရာ ချို့တဲ့ခြင်းမရှိစေရဘဲ အလိုဆန္ဒများ ပြည့်ဝအောင် ထားခဲ့ ကြပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကပင် ILBC လို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာနေခဲ့တာဆို တော့ အပြောအဆို အနေအထိုင်မှ စပြီး အနောက်တိုင်းဆန်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ဦးမလား? အသားဖြူဖြူဝင်း ၀င်း၊ ဆံပင်က လှိုင်းကလေးတွေနဲ့ ပြုံးလိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေး တွေပါသလို ရယ် လိုက်ရင်တော့ သွားတက်ကလေးတွေပါတာ မေးနှစ်ခွနှင့်ချစ်စရာကောင်းသူလို့ ပြောကြပါရဲ့။ ဘယ်အချိန် ကြည့်ကြည့် ကျွန်တော့်ကိုယ် ပေါ်မှာ ရာသီအလိုက် ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေ မထပ်စေရ။ ညနေပိုင်း အားလပ်ချိန်မှာ ကိုသွားသွား နေတော့ ရုပ်ချောကိုယ်လှ ဥစ္စာပေါ ဖြစ်ကာ ပျိုပျိုမေတို့သာမ က ရွယ်တူကောင်ကလေးတွေကလည်း အသည်းစွဲချင်သလား မသိ သူတို့အချင်းချင်း တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုး လုပ် တတ်ကြ တာ ပုံမှန်ကိုဖြစ်လို့ပါ။
ကျွန်တော်က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပေမဲ့ ပညာရေးကိုတော့ အလစ်အဟင်းမခံခဲ့ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့ရ သော နှလုံးအထူးကု ဆေးပညာဘွဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်သွားရန် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ ဒီနေ့ညနေမှာတော့ ဆေးရုံက အပြန် ဌာနထဲ ခဏနားနေစဉ် သူငယ်ချင်း တစ် ယောက်က ကထိက ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်အုန်းကြည်က တွေ့လို ကြောင်း လာရောက် ခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားရာ ဆရာမကြီးက 'ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း' ဟုနှုတ်ဆက်ပြီး သူမလက်ထဲမှ စာ အိတ်တစ်ခုကို ကျွန်တော့်အား ကမ်းပေး လိုက်ပါတယ်။
သိလိုဇောဖြင့် စာအိတ်ကို ကြည့်လိုက်ရာ အစိုးရကိစ္စဖြစ် ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စာထဲတွင် ပါသည့်အကြောင်းအရာမှာ နှလုံးအထူးကု ဘွဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရွေးချယ်စေလွှတ် ကြောင်းနှင့် လိုအပ်သောအစီအစဉ်များပြုလုပ်ပြီး ရှေ့လာမည့် လများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
မျှော်လင့်ထားမှုများ ပြည့်စုံလာမှုကြောင့် ၀မ်းသာရသည်မှာ ညနေထမင်းကိုပင်ဖြောင့်အောင်မစားနိုင်တော့။ နောက်ရက် များတွင် ခွင့်ယူ၍ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ် ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိ ဂျပန်သံရုံးသို့သွားကာ အ လိုရှိသော ကိစ္စ များစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ရင်း အချိန် တွေကုန်လွန်စေခဲ့ပါသည်။
ခရီးဆောင်အိတ်ထဲ အ၀တ်အစားအပါအ၀င်အားလုံးပြင်ဆင် ထည့်ပြီးချိန်မှာတော့ ရင်ထဲ တဖိုဖိုနှင့် သွားရမည့်ရက်တွေကို စောင့်မျှော်မိ ပါတော့သည်။ ကျွန်တော် ဂျပန်ပြည်ကို မထွက် လာမီတစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများက ဂုဏ်ပြုပွဲငယ်ကလေးတစ်ခုပြု လုပ်ပြီး နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ၀မ်းသာခြင်းနှင့် ၀မ်းနည်းခြင်းတို့ ရောယှက်နေတော့တာ။
နောက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ MAI TG လေယာဉ်ဖြင့်ထွက် Thai တွင် Transit လုပ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးစတင် ထွက်ခဲ့ရပါတော့သည်။ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့သော ဂျက် လေယာဉ်မှာ တစ်နိုင်ငံပြီးတစ်နိုင်ငံ ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းရင်း နာရီ ပါင်းများစွာကြာ ပြီးသောအခါ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော် လေယာဉ် ကွင်းသို့ဆိုက်ရောက်ဆင်းသက်ခဲ့ပါတော့သည်။ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်တာနှင့်အညီ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု မှာ အလွန်ချမ်းအေးလျှက် ရှိပါသည်။ တည်းခိုရန် ဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိ၊ ပစ္စည်းများ နေရာတကျ ထားပြီး နောက်မှာတော့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အိပ်စက်လိုက်ပါတော့ သည်။
တိုကျိုမြို့တော်သို့ရောက်ပြီး နောက်တနေ့တွင်ပြုလုပ်စရာရှိ သော အစိုးရကိစ္စအ၀၀ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော်ပညာ သင်ကြားရမည့် ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်ပြီး ပညာ တော်သင်အဖြစ်ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းပို့ပြီးပြန်ခဲ့ပါ တော့သည်။ ရောက်စ ၂ရက် ၃ရက် အတွင်းမှာတော့ တစ်ကိုယ် တည်း ခြောက်သွေ့စွာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး အိမ်လွမ်းနာကို စတင်ခံ စားရစပြုသလိုပင်။
ကျောင်းစတက်ရတော့လည်း နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသား လူ သစ်ဖြစ်နေသောကြောင့် သူငယ်ချင်းအဖော်မရှိသော်လည်း ၂လအတွင်း၌ ပင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများစွာမှာ ဂျပန်လူမျိုးသက်သက်သာ မဟုတ် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဆေးပညာသင်ရန် ရောက်ရှိနေကြ သော အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊အာဖရိက စသည့်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတွေ့ရှိသိကျွမ်းခဲ့ရလေ၏။ ထိုအထဲတွင်မှ အရင်းနှီးဆုံး နှင့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ် ယောက်ရှိပေသည်။ သူကား ဂျပန်လူမျိုး ကောင်ကလေး 'Hitoshi' ဆိုသူဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်နှင့် အဆောင် တစ်ခုထဲ အခန်းတစ်ခုထဲနေရသော ဆေးကျောင်းသားဖြစ်ပေသည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အထူးဂရုစိုက်ကြင်နာသလို တစ်ခါတလေ သူ့ဂရုစိုက်မှုများဟာ ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်စေသလိုပင်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေဘာကြောင့် ရင်ခုန်ပါလိမ့်နော်။
ရက်၊လ၊နှစ်များ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း နှင့် မြို့တွင်းမြို့ပြင်လည်ပတ်သွားလာလျှက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကို လေ့လာမိပါသည်။ လူတွေ ပျားပန်း ခတ်သွားလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောကြောင့် နေ့ညမပြတ် စည် ကားလျက်ရှိ၏။ ညအချိန်တွင် နီယွန် မီးရောင်စုံထွန်းညှိထား သောကြောင့် မြို့၏ကျက်သရေကို တင့်တယ်စေပါသည်။ ကုန်တိုက်များ၊ ဟော်တယ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးများနှင့် လူစည် ကားရာဈေးများမှာ နိုင်ငံခြားသားများခြေချင်းရှုပ်အောင်သွား လာလည်ပတ်သော အချက်အခြာများဖြစ်တော့သည်။
တနေ့သော ဧပြီလ ညတစ်ညတွင် ကျွန်တော်၏သူငယ်ချင်း 'Hitoshi' ကအပြင်သို့ အလည်သွားရန်ခေါ်သဖြင့် ကျွန်တော် လည်း အလန်းစားပြင်ဆင်ကာ သူနှင့်လိုက်ပါခဲ့တော့သည်။ တိုကျိုမြို့တော်၏ ညရှုခင်းများကို နေရာအနှံ့အပြား လည်ပတ် ကြပြီးနောက် လူစည်ကားရာ မြို့လယ်ပန်းခြံကြီးတစ်ခုအတွင်း ခုံတန်းလျားတစ်ခုတွင် ကျွန်တော်တို့အနားယူအပန်းဖြေရသည် ပေါ့။ ကျွန်တော်သိလို သော ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းတွေကို မေး ကြည့်ရာ 'Hitoshi'က ဂျပန်နိုင်ငံ လှုမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးစံများအကြောင်း စိတ်ရှည်လက် ရှည် ရှင်းပြ၊ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှုစနစ်များကိုလည်း ပြောပြပါတယ်။ သူသိလိုသော မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း များကိုလည်း ကျွန်တော် က တစ်ဆင့်ဖောက်သည်ချလျှက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပိုမိုခင်မင် ရင်းနှီးခဲ့ကြရလေတော့သည်။
ပန်းခြံ၌ ည၇နာရီခွဲအထိ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ပြီးသည့်နောက် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆောင်သို့ပြန်ရန် နေရာမှထလိုက်ကြ သည်။ ထို့အခိုက် ကျွန်တော်တို့နားတွင် မည်သည့်အချိန်က ရောက်နေသည်မသိရသော လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း 'Hitoshi' အားရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ်ဆက်ရင်း စကား အနည်းငယ်ပြောဆိုကြကာ ကျွန်တော့်ဘက်သို့လှည့်ကာ.... 'Hitoshi' က သူနှင့်ချစ်ကြိုက်လျက်ရှိသော သူ၏ ချစ်သူ 'Koji' ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးသောအခါ ကျွန်တော်နှင့် 'Koji' တို့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ဆွဲကာ ရင် ချင်းအပ် ပခုံးခြင်းဖက်ကာ နှုတ်ဆက်ရသည်ပေါ့။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲ တစ်ခုခုနင်သွားသလိုပင်။ 'Hitoshi' ကို သ၀န်တိုသည် လား အမျိုး သား နှစ်ယောက် က ချစ်သူဟုဆိုခြင်းကြောင့်လား တော့မသိ။ ရင်ဘတ်ထဲတော့ ထူးဆန်းသော ရင်ခုန်မှုတစ်မျိုး လည်း ဖြစ်တည်လာ တော့သည်ပဲ။
'Koji' က 'Hitoshi' ဘက်လှည့်ကာ 'ရှင်ဂျုကု'သို့သွားကြဖို့ ပြောဆိုသလို အဲဒီမှာရှိတဲ့ သူတို့သွားနေကြ ကလပ်တစ်ခုကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်လေရဲ့။ ဒီတော့ အသစ် အဆန်းလုပ်ရတော့မယ့်သူလို ကျွန်တော့်ရင်တွေ တဖိုဖိုဖြင့် လက်ခံဖြစ်လိုက် ပါသည်။
အချိန်သိပ်မကြာ သွားလိုက်ရတဲ့ကာလတစ်ခုအပြီး ညကလပ် တစ်ခုဆီသို့ရောက်ရှိသွားကြတာမှာ သူတို့ကတော့ အထာကျ နေပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အဆန်းဖြစ်နေတာလေ။ မငြင်းဆန် မိတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်လည်းအံ့သြမိပါရဲ့။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် မှ တစ်မျိုး တစ်မည်ဖြစ်ချင် စမ်းသပ်ချင်လာတာကြောင့်' Hitoshi' အလိုကျအပေါင်းအသင်းဖြစ်ခဲ့ရတာ။
ကလပ်ထဲမှာတော့ ပြာလဲ့လဲ့မီးရောင်ကိုသာထွန်းထားတာ ကြောင့် ကျွန်တော့်ဘေးကထိုင်နေသော 'Hitoshi'တို့စုံတွဲမှအ ပ အခြားသူ များကို သဲကွဲစွာမမြင်နိုင်ချေ။ 'Hitoshi' ၏ချစ်သူ 'Koji' ကဘီယာဖန်ခွက်ကိုမော့လိုက် 'Hitoshi' နှင့် တီးတိုးပြော ဆိုရယ်မောလိုက်နှင့် ကျွန်တော့်ကိုမေ့နေသလားမသိ။ ဟိုသည် ကြည့်နေရင်း သတိပြုမိရသည်က ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေသော နေရာမှာ စတိတ်စင်တစ်ခုနား ကပ်လျှက်ရှိသောကြောင့် ဂီတ သံများကို ကောင်းစွာကြားနေရပါသည်။
၁၀မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ တေးသံများတိုး၍ပျောက်ကွယ် သွားပြီး စင်ပေါ်မှ ကတ္တီပါလိုက်ကာကြီးပွင့်သွားကာ ခပ်ချော ချော လူငယ်တစ်ဦးအမှောင်ထဲမှ တီးလုံးနှင့်အညီ ခပ်ဖြေး ဖြေးထွက်လာပါတော့သည်။ ဆလိုက်မီးကလည်း မှောင်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း လင်း လဲ့လဲ့ဖြစ်လာကာ အဆိုပါ လူငယ်ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ် အလင်းမရောက်တရောက်ပေးထားပုံမှာ ဂရိနတ်သား တစ်ပါးကောင်းကင်ဘုံကကျ လာသလိုထင်မှတ်မှား စေပါတော့ သည်။ ခါးမှာ အ၀တ်စာလေးတစ်ခုကို တည်းတည်းလေး ချည် နှောင်ထားပြီး အချိုးကျခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ် ရှားဟန်တစ်မျိုးဖြင့် ယိမ်းနွဲ့ကာ အရှေ့သို့ထွက်လာပုံမှာ ရင်ခုန်ဖို့ပိုကောင်းသည် ပဲ။
စင်ရှေ့နားက ဆိုဖာပေါ်မှာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားနေရင်း နှိုးဆွကပြ နေစဉ်မှာ တီးလုံးသံခပ်ပြင်းပြင်းထွက်ပေါ်လာလျှက် အတော် ထွားကြိုင်းတောင့်တင်းသော ကာယဗလမောင်ဆိုက်နဲ့လူငယ် တစ်ဦးထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ ဒုတိယလူက တဖြည်း ဖြည်းနဲ့ ပထမလူနားကပ်သွားပြီး အနားသို့ရောက်သောအခါ ခွဲခွာနေကြရသော ချစ်သူများပမာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပြေး၍ဖက်ထားလိုက်ကြလေသည်။ တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်လျှက် ဘာသံမျှမကြားရတော့။ တီးလုံးသံများမှအစ ဘာ သံမှမကြားရပေ။ ဂျပန်ဘဲချောချောလေးနှစ်ယောက်မှာ တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး ကြင်နာယုယစွာ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ကြပြီးသည့်နောက် ခပ်တောင့်တောင့် လူငယ်က အခြားလူငယ်လက်ကိုဆွဲကာ အ ခန်းတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ အခန်းတွင်း၌ အဆင် သင့်ပြင်ထားသော ကုတင်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီး အခမ်းအနားကို လှပစွာပြုလုပ်ထားလေသည်။ ခပ်တောင်တောင့် ကိုကိုထွားက အခန်းတွင်းသို့ရောက်ပြီးနောက် သူ့အဖော်ကောင်လေး ကိုကို ချောကို တစ်ချက်မျှနမ်းလိုက်ပြီး အ၀တ်များကို ဆွဲချွတ်တော့ သည်။ ခပ်ချောချောကောင်လေး ကိုကိုချောမှာ သဘောမတူ ဟုန်ပြုသော်လည်း သူဝတ်ထားသော အ၀တ်မှာ အထူးအထွေ မဟုတ် အ၀တ်စတစ်ခုသာပတ်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့် G-string တစ်ထည်သာ ကျန်တော့သောပေါ့။ ကိုကိုချောက ဟန် မူပါပါဖြင့် ဘေးတစ်စောင်းလှည့်လိုက်ချိန်တွင် ကိုကိုထွားက တင်ပါးတွေကို အသာအယာဖျစ်ညှစ်လိုက်ပြီးနောက် သူ့ကိုယ် ခန္ဓာမှ အ၀တ်တွေကိုလည်း စတင်ချွတ်နေပါတော့သည်။ အ ပေါ်ရှပ်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ရင်အုပ်ကားကားတွေက အားရ စဖွယ်ထင်းကနဲပေါ်လာသလို ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်သော အခါမှာတော့ ပေါင်ကြားက ဒုံးပျံက မိုးပေါ်ထောင်နေတာ ထွား မှထွား။
ပြောရရင်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာ မှောက်လျက် တင်ပါးခပ်ကော့ ကော့အနေအထားဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည့် ကိုကိုချော၏ လည် ဂုတ်အားအသာနမ်းလျက် သူ၏လုပ်ငန်းစရန် သိုင်းဖက်လိုက် ကာ အိပ်ယာပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်တော့သည်။ ကိုကိုချောက အောင်မြင်ကြီးထွားလှသော ကိုကိုထွား၏ -ီးကြီးကို တက်မက် သောမျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်နေသလို ကိုကိုထွားကလည်း သူ၏ လက်တွင်းရောက်နေသော ကိုကိုချောကို စူးစိုက်ကြည့်နေတာ များ တက်မက်မိန်းမူးစွာ။
ပထမတော့ ကျွန်တော်မျက်နှာမထားတတ်အောင်ရှက်နေမိ ပါ သည်။ ထို့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစေ့တစောင့် အကဲ ခတ် လိုက်သောအခါတွင် စုံတွဲတိုင်းလိုလိုသည် စင်ပေါ်မှ ဘဲ နှစ်ပွေ နှင့်အပြိုင် နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့လျှက် နမ်းစုပ်နေကြသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ တစသက်နဲ့တစ်ကိုယ် ယခုကဲ့သို့ လူကိုယ် တိုင်အ ရှင်လတ်လတ်ကပြသော ဖျော်ဖြေမှုမျိုးကို မကြည့်ခဲ့ရ ဘူးသော ကြောင့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းနှင့်ခုန်နေပါသည်။ ရှက်နေ သလိုဖြစ်နေသော်လည်း မကြည့်ဘဲမနေနိုင်သော ကြောင့် စင် ပေါ်ကအတွဲကို ဆက်လက်ကြည့်လိုက်သောအခါ တွင်မှာတော့ ကိုကိုထွားက သူ့လဒစ်ထွားထွားကိုအရင်းက ကိုင်လျက်ခါး အားဇကောဝိုင်းကလျက် ကိုကိုချောရဲ့မျက်နှာရှေ့ မှာ ဝေ့၀ဲပြ လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ခုတင်ပေါ်က ကိုယ် တော်ချောရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ တက်မက်မှုကြောင့် အရောင်တွေတောက် လာသလို သူ့နှုတ်ခမ်းမှလျှာများဟာလည်း မြွေတစ်ကောင်လို ပြူတစ်ပြူတစ်ဖြင့်။ ခဏကြာတော့ လက်ဖြင့်လှမ်းကိုင်လိုက်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ စုပ်ယူလျှက် ပြုစုပါတော့သည်။ ကိုကို ထွားကလည်း ခါးကိုကော့ကာ အရသာခံလျက်ဖြင့် လက်တစ် ဖက်ကလည်း ကြားကပေါ်နေတဲ့ ခရေ၀ကို လှမ်းလှမ်းကလိနေ သေး၏။ အတန်ကြာ လဒစ်ကိုစုပ်မျိုပြီးနောက် ကိုကိုထွားက လက်ဟန်အမူအယာဖြင့် ပြလိုက်ရာ ကြိုးကိုအသာလျှော့ကာ မွှေ့ယာပေါ်အသာခပ်ကုန်းကုန်း ကိုကိုချောက မှောက်လိုက် လေသည်။
တင်ပါးတွေကို လက်ဝါးဖြင့် ခပ်ဆပ်ဆပ်ရိုက်လျက် ဆုပ်ညှစ် လျက်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ဖြဲကာ မျက် နှာအပ်လိုက်လေတော့သည်။ လျှာတစ်ချောင်းလုံး အလျား လိုက် ဒေါင်လိုက် ရစ်ဝိုက်လိုက် ကိုကိုထွားကပြုစုနေသည်မှာ ကိုကိုချောတစ်ယောက် ဆံနွယ်တွေ ဝေ့၀ဲနေအောင် ဖီးလ်တက် နေလေပြီ။ နောက် ကိုယ်ခန္ဓာကို လက်ဖြင့်အလိုက်သင့်ဆွဲယူ လိုက်ပြီးနောက် လေးဘက်ထောက်အနေအထားဖြစ်စေကာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုနွှဲဖို့ ဆက်လက်ပြင်ဆင်တော့သည်။ ခုတင်ဘေးက စင်လေးပေါ်တင်ထားသော ဘူးကြီးကိုယူ ခရေ၀မှာ များများ ညှစ်ချ သူ့လဒစ်မှာ ကွန်ဒွန်ကိုစွပ်ကာဖြင့် ကီသွင်းနေသည့် ကိုကိုထွားကို ကြည့်ရသည်မှာ ကျွန်တော်ဖြင့် လန့်မိသလိုရှိ သား။
ခပ်ကုန်းကုန်းဖြစ်နေသူရဲ့ တင်ပါးကို အသာဖြဲ ဒစ်ကြီးအားကွမ်း သီးခေါင်းမှ တဆင့် အရင်းသို့တိုင် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့် သွင်းလိုက်ရာ ကိုကိုချောခမျာ ခါးကော့သွားက အော်သံသဲ့သဲ့ ထွက်သည်အထိ ညည်းတွားလေတော့သည်။ ထိုသို့ကြည့်နေ ရင်းက ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဖိုလှိုက်ဖိုလှိုက်ဖြစ်ကာ မဖော်ပြတတ် သော ဝေဒနာတစ်ခုကို ခံစားနေရလေသည်။ အောက်ကလူက ထွန့်ထွန့်လူးနေသလိုပင် အပေါ်က လူကလည်းအားနဲ့မာန်နဲ့ ဆောင့်နေသည်မှာ တဖွတ်ဖွတ်တဖတ်ဖတ် အသံများထွက်လာ သည်အထိ တအားဆောင့်နေ၏။ အရှိန်ပါလာသည့်အခါများ တွင် ရွှေဥများပါမြှုပ်ဝင်သွားမတတ် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပေး လျှက်ရှိသလို အောက်ကလူကလည်း အားကျမခံ အောက်မှ နေ၍ ကော့ကော့ပေးလေသည်။ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာသော အခါ ကိုကိုထွားမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကာ ကိုကိုချောပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားလေသည်။
ကိုကိုထွားက သုတ်ရည်ထွက်သွား၍ တစ်ချီပြီးသွားသော်လည်း ကိုကိုချောမှာ ကျေနပ်ပုံမရသေးပေ။ သူ၏တင်ပါးနှစ်လုံးကို ဆတ်၍ ဆတ်၍ကော့ပေးလျှက်နေပြန်သည်။ ခဏကြာသော် သူစိတ်မရှည်သလို အိပ်ရာပေါ်တွင် ထထိုင်ကာ ကိုကိုထွားကို ဆွဲထူလိုက်၏။ ပြီးလျှင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ တွဲကျနေ သော -ီးကြီးကို လက်ဖ၀ါးဖြင့် ရှေ့တိုးနောက်ငှင်ပြုလုပ်ပေးနေ သည်။ ထိုမှတဖန် ပါးစပ်တွင်းသို့ထည့်ကာ အသံမြည်အောင် ပင် စုပ်ပေးနေသဖြင့် ကိုကိုထွားမှာ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်တွန့်လူး နေတော့၏။ အာငွေ့ကြောင့် -ီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းပမာ ထောင်လာရာ ကိုကိုချောက ကွမ်းသီးခေါင်းကို သူ့ပါးစပ်က ချွတ် တစ်ချက်အနမ်းပေးရင်း နှစ်သိမ့်လိုက်လေသည်။ ထိုကဲ့ သို့ ကိုကိုထွား၏ ညီ ငထွားအစွမ်းကုန်မာထောင်လာသော အခါတွင် ကိုကိုချောက အိပ်ယာပေါ်သို့လှဲအိပ်ကာ ပေါင်နှစ်လုံး ကို အပေါ်မြှောက်လျက် တစ်တီတူးထောင်ပေးလိုက်ရာ သူ၏ ခရေ၀မှာ ပွင့်အာသွားလေသည်။ ဒါကို ကိုကိုထွားက ခြေ ထောက်တွေကို ထိန်းကိုင်လျှက် သူ၏-ီးကြီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့် ကာ စက်သေနတ်ပစ်တော့သည်။ သူတို့စုံတွဲမှာ အပေးအယူမျှ မျှတတနှင့် -ိုးကြပြီး မကြာမှီပင် နှစ်ယောက်သား ကုတင်ထက် တွင် ငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်။
ကိုကိုထွားမှာ မောပန်းစွာအိပ်မောကျသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ကိုကိုချောက အိပ်မပျော်သေးဟန်ဖြင့် ထထိုင်ကာ စာဖတ်ခန်း သို့ သွားလေသည်။ ထိုအခိုက်တွင် မှောင်ရိပ်မှာ ချောင်းနေသူ ဂျပန်ကြီးတစ်ယောက် အခန်းထဲဝင်လာပြီး တံခါးအား ချက်ချ လိုက်တော့သည်။ ကိုကိုချောက စာဖတ်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ် ခဏလှဲနေပြီး မျက်စိမှိတ်ကာ အနားယူဟန်ပြချိန်တွင် ဂျပန်ကြီး က ရုတ်တရက် ပွေ့ဖက်လိုက်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လေးဖက် ထောက်စေဖို့ ကြိုးစားရင်း ပါးစပ်ကလည်း ဘာတွေပြောနေမှန်း မသိ။ ကိုကိုချော ခမျာ သူ့ချစ်သူမဟုတ်သည့် တခြားတစ် ယောက်ရဲ့ အတင်းအကျပ်ပြုကျင့်မှုကို ခံရတော့မည်မှန်းသိ၍ ငြင်းဆန်ပေမဲ့ ဂျပန်ကြီးက အထာနပ်စွာဖြင့် တစ်ခုခုပြောကာ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ဟန်တူပါသည် ထိုလူကြီးရဲ့ လက်တွင်း ရွှံ့ရုပ် ဖြစ်သွားပါရော။
နှစ်ယောက်လုံးအ၀တ်ကင်းမဲ့ကြကာ ဆိုဖာပေါ် ပြန်တက်လူး လှိမ့်လှိမ့်အတော်ကြာ လှုပ်ရှားကြပြီးနောက် ဂျပန်ကြီးထရပ် လိုက်ရာ ပေါင်ကြားထဲက -ီးကြီးက ဘယ်အချိန်က ထောင်ထ နေသည်မသိပါ။ အလွန်ထွားကျိုင်း ရှည်လျားသော -ီးကြီးမျိုး တစ်ခါမှ ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဖူးပါ။ စင်ပေါ်ကပြရန် တမင်ရွေးချယ် ထားကြလေသလားမသိ။ ယခုဖျော်ဖြေပြသော ယောက်ျားတိုင်း အောင်မြင်သော -ီး ပိုင်ရှင်များချည်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ကြီး ဆိုဖာပေါ်သို့လှဲလျောင်းလိုက်ရာ ထိုလူကြီး၏ -ီးကြီး မှာ မိုးသို့မျှော်ကာ ထောင်မတ်နေသည်။ ကိုကိုချောမှာ ထိုလူ့ မျက်နှာကိုကြည့်လိုက် ရှည်လျားလှသော -ီးကိုကြည့်လိုက် ကြောက်များနေရော့သလားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုချောက အပေါ်မှ တက်ခွကာ သူ့ခရေ၀သို့ အသာတေ့ရင်း ဖင်ကို အသာကြွ၍ ခပ်ပြင်းပြင်း အံကြိတ်၍ ထိုင်ချလိုက်လေ၏။ ဘွတ်....ဖွတ် ဟူ သော အသံများနှင့်အတူ သူ၏ ခရေတွင်းထဲ တနင့်တပိုးဝင် သွားသဖြင့် မျက်နှာတပြင်လုံး ရှုံ့မဲ့သွားလေသည်။ ကိုကိုချော အောင့်သွားရောထင့် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးမှ...သူ၏ တင်ပါးများကို ကြွကာ မြောက်လိုက် ဆောင့်လိုက်ဖြင့် ခပ်ပြင်း ပြင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ရာ သူ့အတွက်တော့မသိ ဟိုလူကြီးက တော့ ခါးကိုကော့ပြီး အောက်ကနေ ပင့်ထောက်ထားပေးလေ သည်။ ပထမအကြိမ် ကိုကိုချော ခံရပုံနှင့် အခုတစ်ကြိမ် ခံရပုံက မတူ ဒီတစ်ခါက ကြည်ဖြူမှုမရှိ အလိုကျကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံ နေရလေသည်။ ကိုကိုချောက ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ဂျပန်ကြီးက ကြီးကြီးထွားထွားမဲမဲ ကျွန်တော်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ် ယောက်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေမိရပါသည်။
တီးလုံးသံတစ်မျိုးပြောင်းသွားသလို ဂျပန်ကြီးက ဆိုဖာပေါ်သို့ ကိုကိုချောအား ပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင် ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်ကာ သူ၏ရှည်လျားထွားကျိုင်း သော -ီးကြီးကို အပေါက်ဝသို့တေ့ကာ အဆက်မပြတ်ဆောင့်နှဲ့ တော့သည်။ အောက်မှ ကိုကိုချောမှာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ပက် ပက်စက်စက် ခံနေရသဖြင့် ထွန့်ထွန့်လူးနေလေသည်။
ကြာလာတော့ နာကျင်မှုကို ဖြေဖျောက်သည်လား လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်သည်လားတော့မသိ ကိုကိုချောလေ ထိုဂျပန်လူကြီးဆောင့် လိုက်တိုင်း သူပါပြန်လည်ဆောင့်ပေးနေလေသည်။ ရုတ်တရက် ကိုကိုချောက ဂျပန်ကြီးအား သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ တွန်းချလိုက်သော အခါ -ီးကြီးမှာ ဖင်ဝမှကျွတ်ထွက်သွားပြီး တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေ ၏။ ထို့နောက်ထွက်ပြေးမလိုလုပ်ရာ ဂျပန်ကြီးက လှမ်းဆွဲလိုက် တော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားဖြင့် လဲကျ သွားလေသည်။ ဒီတွင် ဂျပန်ကြီးက တင်ပါးတွေကို တဖျန်းဖျန်း မည်အောင် ရိုက်လိုက်ကာ ပါးစပ်က ဘာပြောသည်မသိ ကိုကို ချော အဲဒီ့အတိုင်း ပုံစံမပြောင်းငြိမ်နေဆဲမှာ အချိန်ဆိုင်းမနေ တော့ နောက်ကနေ အသာနေရာယူလိုက်ပြီး -ီးကြီးကို ဖင်ဝ သို့သွတ်သွင်းကာ ညှောင့်တော့သည်။ ၁၅မိနစ်ခန့်ပြီးသော အခါ ကိုကိုချောက သူ့တင်ပါးတွေကို နောက်ကို တွန်းတွန်းပို့ နေသလို ဟိုလူကြီးကလည်း အသားကုန်ပို့နေလေသည်။
တီးလုံးသံ ဆူညံစွာပြောင်းလဲသွားပြီး ကိုကိုချောမှောက်ရက်ကျ သွားသလို ဂျပန်ကြီးကလည်း သူ့အပေါ်မှောက်လျက် အိပ်ချ လိုက်သောအချိန်တွင် ကတ္တီပါလိုက်ကာမှာ တဖြည်းဖြည်း ပိတ် သွားလေတော့သည်။
ကပွဲပြီး၍ ထွက်လာစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပေါင်ကြားက ညီ ဘွားက အတင်းခေါင်းထောင်ထနေသဖြင့် ဘောင်းဘီထဲမှာ ထိုး ထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လို့။ ဟီတိုရှိကြည့်လိုက်တော့လည်း သူ့ ဘက်ဂီဘောင်းဘီထဲ မသိမသာ ဖောင်းနေရော။ သူ့ချစ်သူ က တော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး အဆီပြန်နေကာ မျက်လုံးတွေက ရီဝေ ဝေဖြင့် အရောင်လက်နေ၏။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အားနာ သဖြင့် ကျွန်တောကပင် ရှေ့ကထွက်လာပြီးအပြင်ရောက်မှ တက္ကဆီတစ်စီးကို ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ထိုနေ့ညက ကျွန်တော့် ကို ကျောင်းဝင်းထဲက ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကိုပြန်ပို့သော် လည်း ဟီတိုရှိက ဒီနေ့ည နှင့် အပြင်မှာပဲ အိပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆောင်မှူး သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဟီတိုရှိတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းတွေးရင်း ကျောင်းဝင်းထဲဝင်လာကာ အဆောင်ရှိရာသို့ အရောက် အ စောင့် ဘိုးတော်က ကျွန်တော့်အားလှမ်း၍ ပြုံးပြလိုက်ပါသည်။ သူ့အပြုံးက အပြင်မှပြန်လာတာ နောက်ကျလှချည်လားလို့ မေးနေသလိုပါပဲဗျာ။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ ရေချိုးတော့လည်း ရေပူကိုမဖွင့်မိ ဆပ်ပြာတိုက်တော့လည်း ကိုယ့်ခန္ဓကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန်ကိုင်ကြည့်ရင်း သွေးတွေဆူပွက်လာမိသည်။ ညအိပ်အ၀တ် အစားများလဲလှယ်ကာ ခုတင်ပေါ်လှဲလျောင်းနေမိတော့ ကပွဲ ခမ်းမက စုံတွဲရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို တစိမ့်စိမ့်တွေးစမြုံ့ပြန်နေရာက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားအတင်းကိုခေါင်းထောင်ထလာ သောကြောင့် ထုံးစံအတိုင်းပင် လက်ငါးချောင်းကို အဖော်ပြုကာ -ွင်းတိုက်ပြီး အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။
'ငါတော့ နိုဘုကို အခိယာမရဲ့ လှိုင်းပုတ်သံဆိုတဲ့ အရုပ်လေးကို သဘောအကျဆုံးပဲသိလား တကယ့်လှိုင်းပုတ်သံကို နားစွင့်နေ တဲ့မျက်နှာပေးလေးနဲ့'
'အီရှု (isho) လူရုပ်လေးတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် အ၀တ် အ စားလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရုပ်သက်သက်မဟုတ်ဘူး သမိုင်း ကြောင်းတွေကိုပြောပြနေသလိုပဲနော်'
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Hitoshi'ကတော့ စံပါပဲ။ အကူအညီ လည်း တကယ်ပေးစောင့်ရှောက်ပါတယ်။ ကျောင်းစာသင်ခန်း ထဲမှာ၊ အပြင် ထွက်လည်ရာမှာ တတွဲတွဲနှင့်ပါ။ သူငယ်ချင်း ဂျပန်ကောင်မလေးတွေနှင့်တောင် ဒီလောက်မတွဲဖြစ်ပါဘူး။ Hitoshi' ရည်းစား 'Koji'က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ထားသူ ဆိုတော့ ရက်ခြားလောက်သာ Hitoshi'ကို လာလာတွေ့ဖြစ် တယ်။ အဲဒီ့အခါမှသာ ကျွန်တော်တို့ ခွဲနေဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။
ဒီနေ့ အတန်းချိန်စောပြီးသလို ဘယ်မှလည်းမသွားချင်တာ ကြောင့် ဂျပန်သူငယ်ချင်းမလေး'Ryoko' နှင့် စကားစမြည်ပြော သူ့ကို ဘူတာရုံလိုက်ပို့ကာ အဆောင်ကိုပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Hitoshi' ကတော့ အစောကြီးကတည်း အတန်းထဲက လစ်သွား တာ။ ဒီကောင် သူ့ဘဲနှင့်သွားတွေ့သလားမသိ။
ကျွန်တော့်အခန်းသို့ရောက်သောအခါ စကားပြောသံများထူး ဆန်းစွာ ကြားနေရသောကြောင့် သော့ကိုအသာဖွင့်ပြီး ခပ်ဖြေး ဖြေးဝင်ကာ နံရံအကွယ်မှ အသာချောင်းကြည့်လိုက်ပါသည်။ Hitoshi'နှင့် အတန်းထဲက အမေရိကန်သူငယ်ချင်း ၀ီလီယံတို့ တီဗီရှေ့ကဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတာ။ အစက အသံပြုပြီး ၀င်သွားမလို့လုပ်ပြီးမှ သူတို့မှာ အ၀တ်မရှိကြတဲ့အပြင် ခန္ဓာ ကိုယ်ခြင်း ထိကပ်ထားကြတာကို သတိမူမိသောကြောင့် အသာ ငြိမ်ပြီး ချောင်းကြည့်ဖြစ်တော့တာပေါ့။
ကြည့်ရတာကတော့ ၀ီလီယံက Hitoshi' ငပဲကို ပြုစုပေးပြီးဖြစ်ပုံ ရသည်။ သူ့ပါးစပ်မှ အရည်တွေကို တစ်ရှူးနှင့် သုတ်ပစ်နေ သည်။ Hitoshi'မျက်နှာက ကျေနပ်ပြုံးပြုံးလျက်။ ၀ီလီယံက ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ Hitoshi' လက်တွေကတော့ ၀ီလီယံတင်ပါးတွေကို ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်နေ ရာက နေရာပြောင်းကာ ကြီးထွားရှည်လျားတဲ့ ဒစ်ကြီးကို ဆုပ် ကိုင်ဖျစ်ည္ဓစ်တော့သည်။ ၀ီလီယံ ၏ -ီးကြီးသည် အရှည် ၇လက် မကျော်လောက်သည်။ ပြီးတော့ လုံးပတ်မှာလည်း အတော် တုတ်ကာ ထိပ်ဝ ဒစ်မှာ ပို၍ကြီးသည်။ ၀ီလီယံ က Hitoshi' နှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုပ်နေရာကနေ လည်တိုင်...ပြီးတော့ ဗိုက်သား တွေဆီ..။
ခဏနေတော့ Hitoshi'ကိုယ်လေးကို အသာချီမက ခုတင်ပေါ် သို့ မှောက်လျက်တင်လိုက်ပါတယ်။ မို့မို့ဖောင်းဖောင်း အားရ ဖွယ် Hitoshi'တင်သားတွေကို မြင်ရပြီးချိန်မှာတော့ ၀ီလီယံမျက် ၀န်းတွေ ပိုမိုတောက်ပြောင်လာကာ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ တင်သားတွေကို ဆုပ်ညှစ်နေသည်။ အားရကျေနပ်သွားတော့ တင်သားလေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အသာဖြဲ လျှာကိုအရှည် ကြီးထုတ်ကာ Hitoshi' ခရေ၀ အား ကလိတော့သည်။ လျှာကို အထက်အောက်ရွေ့လျားလိုက်၊ မာတောင်အောင်တောင့်ထား လျက် ဖိသွင်းလိုက်လုပ်နေသည်မှာ Hitoshi' နိဗ္ဗာန်ရောက်နေ ဟန် 'တအိအိ....တအင်းအင်း'ဖြစ်နေလေသည်။
ရုတ်တရက် ၀ီလီယံထရပ်လိုက်ကာ သူ့ဒစ်မှာ ကွန်ဒွန်ကိုစွပ် ချောဆီရွှဲရွှဲသုတ်ကာ Hitoshi' ခရေ၀ထဲသို့ တစ်ရစ်ခြင်း ဖိသွင်း လေတော့ သည်။ Hitoshi'မှာ ပါးစပ်ကိုဟကာ ငြိမ်နေပြီး ၀ီလီယံရဲ့ ဒစ်ကြီးအဆုံးထိဝင်တာကို ငံ့လင့်နေသည်။ ၀ီလီယံ က Hitoshi'ပခုံးတွေပေါ် လှမ်းကိုင်လိုက်ကာ နောက်မှ တစ် ချက်ခင်းမှန်မှန် ဆောင့်ပေးနေတာ တကယ့်ဖီးလ်ပဲထင်ရဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ Hitoshi'၏ ပခုံးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းဖက်ကာ အားရှိပါးရှိ အဆက်မပြတ် ဆောင့် -ိုးလိုက်ရာ 'ပတ်...ပတ်. ..ဘွတ်...ဘွတ်' ဟူသော အသံများပင်ကောင်းစွာကြား နေရပါ သည်။
ကျွန်တော့်မှာ အသက်ပင်ပြင်းပြင်း မရှူနိုင်ပေ။ မြင်ကွင်း၏ သွေးဆောင်မှုကြောင့် ကျွန်တော့်ညီဘွားမှာ အတင်းခေါင်း ထောင် ထလာ တော့သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ၀ီလီယံနေရာ မှာဝင်ကာ စိတ်ရှိလက်ရှိ -ိုးချင်စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်လာပါ တော့သည်။ အစတော့ ၀ီလီယံမှာ ပုံမှန်လုပ်နေရာကနေ အားမ လိုအားမရဟန် ပုံစံအနေအထားပြောင်းချင်ဟန် ဖြင့် ထရပ် လိုက်ရာ Hitoshi' ခရေ၀မှချွတ်ပြီး သူ့-ီး ကြီးမှာ အမြှောက်ကြီး အလားပင်။
၀ီလီယံတကယ်သန်တာပါပဲ။ Hitoshi'ကို ချီပြီး ပက်လက်လှန် လိုက်တာ မြှောက်ကနဲပဲ။ Hitoshi'ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပခုံးပေါ် တင်လိုက်တာကြောင့် ပွင့်အာလာသော ခရေ၀တွင်း သို့ သူ့-ီးကြီးကို လျောကနဲသွင်းလိုက်တာ Hitoshi'ခမျာ အင့် ကနဲတောင် အသံ ထွက်တယ်။ ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ ပေါင်နှစ် ချောင်းကို ကိုင်ကာ အားရပါးရဆောင့်နေသော ၀ီလီယံ၏ မျက်နှာမှာ အခုမှ အားရသည့်ဟန် ပေါ်လာတော့သည်။ မှန်မှန် ဆောင့်လိုက် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုက် သူ့ခါးကိုဇကောဝိုင်းရင်း ဆောင့်လိုက်ဖြင့် -ိုးနေရာ Hitoshi'မှာ ဖီးလ်အတော်မြင့်နေဟန် မျက်နှာက။ ထွားကြိုင်းသော -ီးကြီး ခရေ၀မှာ အ၀င်အထွက်ပြု နေသော မြင်ကွင်းကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတာ ကျွန်တော့်စိတ် မှာ မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင် ဂျင်းဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုကာ ကလိ နေမိတော့သည်။
အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ နှစ်ဦးသားနွှဲနေကြတုန်းပါ။ သူ တို့နှစ်ဦးကာမအထွဋ်အထိပ်ရောက်ခါနီးတွင် Hitoshi က ၀ီလီယံပေါ်သို့ တက်ခွကာ ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကျဆောင့်တော့ သည်။
၀ီလီယံကလည်း အောက်မှနေ၍ ကော့ကာ ကော့ကာ ညှောင့်ပေးလိုက်သည်။ မကြာမီအချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ သူ တို့ နှစ်ယောက် ငြိမ်သွားကြပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူ တို့ မမြင်နိုင်အောင် ခပ်သုတ်သုတ် အခန်းထဲမှထွက်ခဲ့ပါတော့ သည်။
အဆောင်အပြင်သို့ရောက်သောအခါ လေအေးအေးကလေး ထိတွေ့လိုက်သောကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးလန်းဆန်းသလိုရှိ သော်လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ထကြွသောင်းကျန်းနေ သော ရာဂစိတ်များကြောင့် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းရပါ့မလဲလို့ စဉ်းစားရင်း ရင်ထဲမှာလည်း ချီတုံချတုံဖြစ်နေရသည်။ နောက်ဆုံး၌ မြန်မာ ပြည်မှာမှ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံခြားတွင် နိုင်ငံခြားသားများက ကျွန်တော့်ကို ချောင်းမြောင်းအတင်းပြောမည့်သူမရှိဟု ကိုယ့် စိတ်ကိုတင်းကာ တက္ကဆီတစ်စင်းဖြင့် လူစည်ကားရာ မြို့လယ် သို့ ထွက်လာမိပါတော့သည်။ နေ၀င်ဆည်းဆာအချိန်ရောက် နေပြီမို့ တစ်မြို့လုံးရောင်စုံမီးမျး တထိန်ထိန်လင်းနေသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ သက်သာရာ သက်သာကြောင်း ဟိုသည် လျှောက်လည်လိုက်တာ ကပွဲရုံများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ဟိုတယ်များ၊ စတိုးပြခန်း များကို ဖြတ်ကျော်လာပြီးနောက် နာမည်ကျော် 'နာကာမူရား' မြစ်နားသို့ရောက်လာပါတော့သည်။
ခုံတန်းလျားအလွတ်တစ်ခုမှာ ခေတ္တအနားယူရင်း ထိုင်နေဖြစ်ပါ သည်။ နေ၀င်ဆည်းဆာရောင်ခြည်များမှာ မြစ်အတွင်းရေပြင် ပေါ်၌ ဖြာကျ နေပုံများကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ကြည် နူးနှစ်သိမ့်မိပါ၏။ စိတ်ထဲအနည်းငယ်ငြိမ်သွားမိရရင်းက ပတ် ၀န်းကျင်ကို စူးစမ်းကြည့်မိ သောအခါ မိသားစုများ၊ သမီး ရည်းစားစုံတွဲများ၊ အဖိုးအို အဖွားအိုများ စသည်ဖြင့် လေညှင်းခံ လမ်းလျှောက်နေကြသည်ကိုမြင်ရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော မြင်ကွင်းများကို ငေးမိရရင်း တဖက်သို့လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက် သောအခါ လှပသော အဆောက်အဦးကြီးများ၊ ဟိုတယ်ကြီး များကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ အဆောက်အဦးကြီးများထဲမှ လှပ ခမ်းနားသော ဘေးအစွန်ကျသော အထပ်မြင့်မြင့် ဟိုတယ်ကြီး တစ်လုံး ကို နီယွန်မီးရောင်စုံဖြင့်တွေ့ရသည်။ မှိတ်တုတ်မှိတ် တုတ် နီယွန်မီးလုံးများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော ဟိုတယ်နာမည်က 'Land of Cherry' တဲ့လေ။ ဒီနာမည်ကို နှစ်ခေါက်သုံးခေါက် ရွတ်ကြည့်မိတော့ ကြားဖူးသလိုပဲ စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ 'Koji' ပြောလေ့ရှိသော ဟိုတယ်ဆိုတာ မှတ်မိရပါသည်။
တိုကျိုမြို့တော်သည် လူမျိုးစုံဝင်ထွက်သွားလာနေကြသော စည်ကားသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည့်အလျောက် တည်းခိုအ နားယူရာ ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများအပြင် နိုင်ငံခြားသား များဆီက ငွေကိုသဲ့ယူတတ်သော ညကလပ်များ ဟိုတယ်များ လည်းရှိပေသည်။ ထိုအထဲတွင် 'Land of Cherry' လည်းအပါ အ၀င်ဖြစ်တော့သည်။ ဒီဟိုတယ်မှာ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ကြိုက်ရာလူလာ၊ ကြိုက်တဲ့သူနှင့် ကိုယ့်လိုဘကို ဖြည့်စွမ်းဖို့အ ဆင်ပြေသည်။ အစားအသောက်များ ကောင်းကောင်းရသည်။၊ အခန်းသန့်ရှင်းသည်၊ ဈေးနှုန်းကြီးသည် စသည်ဖြင့် ပြော စကားများကိုကြားယောင်လာမိသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်၏ လောလောဆယ်ပြဿနာကို ဤ ဟိုတယ်ကြီး၌ ဖြေရှင်းမည်။ ဒီကိစ္စကိုလည်း မည်သူမျှသိနိုင် မည်မဟုတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အားတင်းရသေးသည်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်လူပျိုဘ၀ကို ဒီနေရာမှာ စွန့်လွှတ်ရမည်လား ၀မ်းနည်းရသေးသည်။ ဒါပေမဲ့ အခု 'Land of Cherry' ရဲ့ လှေ ကားထစ်များဆီရောက်ရှိနေပါပြီ။
Reception ကိုရောက်တော့ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို စုံစမ်းမေးမြန်း ရာ သူက ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးသည်။ ဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင်များ ကို ကြည့် လိုက်ရာ G-String မှလွဲ၍ တစ်ကိုယ်လုံး တုံးလုံးချည်းသာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း ၁၅ပုံ လောက် ရွေးချယ်မိကာ နောက်ဆုံးမှ နံပါတ် ၁၂ကိုရွေးလိုက်မိ သည်။ အချိုးအဆစ်ပြေပျစ်ပြီး အပြုံးလှလှပိုင်ရှင်ဖြစ်နေသော ကြောင့်ပါ။ တစ်ညအတွက် ဂျပန် ယန်းငွေတွေကို ပိုက်ဆံအိပ်မှ ထုတ်ရှင်းပြီးသကာလ ၀န်ထမ်းက ကျွန်တော့်ကို အကဲခတ်သ လိုကြည့်ရင်း အခန်းနံပါတ် ၁၂သော့ကို လက်ထဲသို့ကမ်းပေး လိုက်ပါသည်။ ဓာတ်လှေကားရှိရာကို ခပ်သွက်သွက်လှမ်းကာ ဟိုတယ်အပေါ်ထပ်သို့ အမြန်လှမ်းခဲ့ပါတော့သည်။
တံခါးကို အသာဖွင့်ရင်း အသံပြုလိုက်တော့ 'အထဲကိုဝင်ခဲ့ပါ ခင်ဗျာ၊ ဒီမှာလာထိုင်ပါ 'လို့ဆိုသော အသံတစ်သံကို ကြား လိုက်ရသည်။ ၀ီလီယံနှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Hitoshi'တို့၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကစားပွဲကို အနီးကပ်မြင်ခဲ့ရသည့်အတွက် အ လွန်ထကြွသောင်းကျန်း နေသော ကျွန်တော့်၏စိတ်သည် လက်တွေ့အဖျော်ဖြေခံမည့်လူလည်းတွေ့ရရော ကြောက်ရွံ့သ လိုလို ရင်ထဲပုဇွန်စိတ်တွေခုန်နေ သလိုဖြစ်ကာ အခန်းဝမှာ ရပ် နေမိပါသည်။
သူက 'ကျွန်တော့်နာမည် 'KIRA' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကညီလေး အ လိုရှိသလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်' ဟုပြောကာ သူ၏ ဦးခေါင်း ကိုညွှတ်ကာ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုလေသည်။ 'KIRA'ကိုကျွန်တော်အကဲခတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ အ သက်၃၀၀န်းကျင် အသား ဖြူဖြူ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း နှင့် ယောက်ျားဆန်သော ဂျပန်အမျိုးသားတစ် ယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ နောက်ပြီး သူဟာ အင်္ဂလိပ်စကား ကို ရေလည်အောင် ပြောတတ်နေတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်အဆင်ပြေ ပါသည်။
'ကျွန်တော့်နာမည်က ပီတာပါ ဒီမှာ ခေတ္တခဏလာနေတဲ့ ဧည့် သည်ပါ' ဟုကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့ 'KIRA' က ပြုံးနေပါသည်။ သူ့ကိုမြင်ရသည်မှာ ရည်မွန်ပါသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဖျတ်လတ်၍ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်နေ ပါသည်။ အခန်းထဲ၌ ခေတ္တခဏ အနားယူရင်း စကားစမြည် ပြောကြပြီးနောက် ရေချိုးရန် ရေချိုးခန်းသို့ ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ ပါသည်။ အခန်း၏ တန်ဆာဆင်မှု များမှာ သပ်ရပ်လှပစွာရှိပြီး ဤအခန်းတွင်း၌ပင် လိုလေသေးမရှိအောင် အပြည့်အစုံထား ရှိလေသည်။ ညအိပ်ဝတ်အင်္ကျီ၊ မျက်နှာသုတ် ပ၀ါ၊အိမ်သာ၊ ရေချိုးခန်း၊ ကုတင်နှင့် ထူထဲလှပသော မွှေ့ယာများ၊ အရက် ပုလင်းမျိုးစုံ အစားအစာအပြည့်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာစသည်ဖြင့် ပြည့်စုံလှလေသည်။ အခန်းတွင်းရောက်နေသော ဧည့်သည်အ နေဖြင့် အပြင်သို့မထွက်ဘဲ အလိုရှိတာကိုရနိုင်ပေသည်။ ကျွန်တော် ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် ရေချိုးပြီးသောအခါ နည်းနည်း ပါးပါး ရှိုင်း၍ ည၀တ်အင်္ကျီဝတ်ပြီးနောက် အပြင်ခန်းသို့ထွက် လာသောအခါ 'KIRA' ကိုတွေ့ရလျှင် ရှက်သွားသလိုခံစားရမိ ပါသည်။ ဖန်ခွက်လှလှလေးများထဲ ၀ီစကီများကို အသင့်စပ် ထားကာ ထည့်ထားတဲ့ စားပွဲဘေးမှာ 'KIRA' ကို G-String လေးမှလွဲ၍ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ထားသည်ကို မြင်ရသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ထူးဆန်းနေသော်လည်း သူ့အနေနှင့်မူ လုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်မိပါသည်။ သူ့အနား ခပ်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားလိုက်တော့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေသော အရက်ဖန်ခွက်နှစ်ခုကို ကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ကိုတစ် ခွက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီး သူကတစ်ခွက်ကို ကိုင်ကာ နှစ်ယောက် သား ပြိုင်တူသောက်ကြ၏ အစားအသောက်စားလိုက အဆင် သင့်ရှိကြောင်းပြောသော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ အစာမစားလို တော့ပေ။ ၀ီစကီနည်းနည်းသောက်ပြီးသောအခါ တစ်ကိုယ် လုံးပူနွေးလာပြီး စိတ်ထဲရဲတင်းလာသလိုပင်။ ထို အချိန်ဝယ် 'KIRA' က ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်လာပြီး မထိတထိကလိနေ ပါသည်။ မွှေးပျံ့ပျံ့ကိုယ်သင်းနံ့ကို သူ့ဆီမှ ရနေသလို အခန်း တွင်း၌ သူနှင့်ကျွန်တော်သာရှိသောကြောင့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ပိုမိုရဲတင်းလာမိသည်။
သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပခုံးထက် အသာကိုင်လိုက်ပြီး ရယ် လိုက်လျှင် ပေါ်လွင်သော ပါးချိုင့်လေးတွေ၊ ပါးပြင်အနှံ့ ၊ပြီး တော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို တက်မက်စွာ နမ်းပါတော့သည်။ ခုတင်ဆီ ငြင်ငြင်သာသာ ပွေ့ဖက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော့် ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်များကို အသာအယာဖယ် ရှာပေးတော့သည်။ အ၀တ်မရှိတော့သော ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ် လုံးအား သူ့နှုတ်ခမ်း အစုံဖြင့် နမ်းရှုံ့သည်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ မရိုးမရွဖြင့် အားမလို အားမရဖြစ်လာရသည်။
စိတ်ထဲဝယ် ဘာမှရှက်စရာမလိုဟူသောစိတ်ဖြစ်လာပြီးနောက် သူ့ G-String အားဆွဲချွတ်ကြည့်မိသောအခါ ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တင်း သန်မာသလို -ီးကြီးမှာလည်း သန်မာထွားကြိုင်း လှပါသည်။ ၀ီလီယံကဲ့သို့ -ီးမရှည်သော်လည်းလုံးပတ်မှာ ပိုမို ကြီးထွားသည်။ -ီးအရင်း၌ အမွှေးများက မဲနေသော်လည်း -ီး တစ်ချောင်းလုံးမှာ ပန်းရောင်သန်းနေပါတော့သည်။ လက်နှင့် အသာကိုင်ကြည့်ရင်းစိတ်ထဲမှာ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်မျိုချင်စိတ်ဖြစ်လာ သောကြောင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအတွင်းထည့်ကာ ငုံ လိုက်၏။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာငုံရင်း တပြွတ် ပြွတ်စုပ် မိတော့ 'KIRA' တစ်ယောက် သဘောတကျ ကျွန်တော့်ခေါင်း ကို ထိန်းကိုင်ပေးရင်း သူ့တင်ပါးတွေကို လှုပ်ရှားကာ ပါးစပ်ထဲ ကော့ကော့ထိုးပေးလေသည်။
အားရကျေနပ်လာသည်အထိ စုပ်မိသည့်တိုင် သူကမပြီးသေး သောကြောင့် ကျွန်တော်ဆက်မစုပ်သေးပဲ ခုတင်ပေါ်လှဲလိုက် သောအခါ သူက ကျွန်တော့်ငပဲကိုအသာကိုင်ရင်း ဆွပေးလေ သည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း အချဉ်မဟုတ် လက်တွေ့မလုပ် ဖူးပေမယ့် အမြင်အကြား များစွာရှိသည့်အတိုင်း အလိုက်သင့် လှုပ်ရှားတတ်သည်။ ကျွန်တော့်ညီဘွား ဒုံးပျံကြီးလိုထွားလာ တော့ 'KIRA' မျက်လုံးဝိုင်းပြီး သဘောကျ ကာ ခေါင်းကိုငုံ့ သူ့ ပါးစပ်ပူပူနွေးနွေးထဲ သွပ်သွင်းလိုက်လေသည်။ အို ဘယ်လိုဖြစ် သွားမှန်းမသိ သူစုပ်မျိုပုံမှာ တစ်ကိုယ်လုံးသွေးတွေ ဆူပွက်သွား ရသလားမသိ။ မရှင်းပြတတ်အောင် သူကျွမ်းကျင်လှသည်။ သွားတွေဖြင့်မထိစေဘဲ နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေဖြင့် ရစ်ဝိုက် ပြုစု သည်မို့။ သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်း ကျွန်တော့် နို့သီးခေါင်း လေးတွေကို ကလိနေသေးသည်လေ။
ဒီလိုသာဆို လူပျိုစစ်သေးသော ကျွန်တော့်အဖို့ ဆုံးခန်းတိုင် သွားနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ရပ်လိုက်ဖို့ပြောရင်း ကျွန်တော်သူ့ ကိုယ်လုံးကြီးကို ဆွဲဖက်ကာ မွေ့ယာပေါ်လှဲစေလိုက်သည်။ နောက်သူ့တင်ပါးတွေကို ကိုင်ကြည့်ကာ ဖျစ်ညှစ်ကြည့်လိုက် တော့ သူက အလိုက်သင့် မှောက်ပေးတော့သည်။ တင်သား တွေကို ကိုင်ရသည်မှာ အိအိထွေးထွေးရှိလှသည်။ သူ့ခရေ၀ကို လက်ခလယ်ဖြင့် အသာစမ်းကြည့်မိ သောအခါဝယ် ကျွန်တော့် ညီဘွားက သူ့အစာကို သိသည့်အလား ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်။ 'KIRA' မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ ဆက်လုပ် တဲ့။ ခုတင်ဘေး စားပွဲပုလေးပေါ်က ကွန်ဒွန်တစ်ခုကို ယူစွပ်ကာ ချောဆီနည်းနည်းလူးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် 'KIRA' ခရေ၀ကို အသာတေ့ကာ ခပ်ဖြေးဖြေး ထိုးသွင်းလိုက်တာ ရင်ထဲ ဘယ်လို အရသာမှန်းမသိ ခံစားရသည်။ ၀င်သွားသည်လား မ၀င်သည် လား ငုံ့ ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့် -ီးတံကြီးမှာ သူ့ခရေ၀တွင်မ က အတွင်းထဲသို့တစ်ဝက်ကျော်ကျော် နစ်မြုပ်နေသည်ကိုတွေ့ ရသည်ပေါ့။
ကျွန်တော်ခပ်ဖြေးဖြေး ကလေးပြန်ချွတ်လိုက်ကာ ဒစ်မြုပ်ရုံမျှ လေးငါးကြိမ် ခြောက်ကြိမ် သွင်းချီထုတ်ချီ လုပ်ပြီးမှ လျှောကနဲ အဆုံးထိ တိုင် သွင်းလိုက်ရာ 'KIRA' ခမျာ အင့်ကနဲ တစ်ချက် ညည်းညူရင်း ခါးကော့သွားလေသည်။ ထိပ်ဝထိပြန်ထုတ်လိုက် အဆုံးထိသွင်းလိုက် လုပ်နေရာကနေ ခါးကို သွက်သွက်လှုပ်ရှား ကာ ကျွန်တော် အဆက်မပြတ်ဆောင့်မိသောအခါ 'KIRA'ရဲ့ ပါးစပ်မှ တိုးငြင်းသော ညည်းသံ လေးတွေထွက်ပေါ်လာသည် မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါသည်။
အနည်းငယ်ကြာ တော့ လုပ်ရသည်မှာ ချောင်သည်ဟု ခံစားမိ ရသည်။ ချောဆီ ထည့်တာများသွားလို့လားမသိ။ သူ့ခါးတွေကို လက်ဖြင့်အသာ မလျက် လေးဘက်ထောက်အနေအထားဖြစ်အောင် လုပ်ခိုင်း သောအခါတွင် သူကလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကျွန်တော့် -ိင်တံ သူ့ခရေ၀က မကျွတ်စေရဘဲ ထိန်းပြီးကုန်းပေးသည်။
ဒီတော့ကာ သူ့ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းရင်းဆောင့်ချက် ကိုမြှင့်တော့သည်။ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကော့ကော့သွားတဲ့ သူ့ ကျောပြင်၊ ဝေ့၀ဲသွားတဲ့ ဆံနွယ်တွေ၊ ညည်းသံတိုးတိုး၊ တစ် ချက်တစ်ချက်၊ ဆုပ်ညှစ်လိုက်သော သူ့ဖင်ကြွက်သားများ ကြောင့် အတွေ့အကြုံသိပ် မရှိသော ကျွန်တော့်မှာ Climax သို့ရောက်ရှိလာစေတော့သည်ပဲ။ သူ့တင်ပါးတွေကို လက်ဝါး ဖြင့် ဖြန်းကနဲ ဖြန်းကနဲ မည်အောင်နှစ်ချက် သုံးချက်ရိုက်လိုက် ကာ အဆက်မပြတ် တရစပ် ဆောင့်ရင်း လူပျို့အားတွေ သူ့ ခရေတွင်းထဲအပြည့်ဖြည့်။
သူက ချွေးတွေရွှဲနေသည့် ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးရယ်၊ ပြီး တော့ မျက်နှာရယ် အသေအချာစိုက်ကြည့်ပြီးနောက် 'မင်းက တကယ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကောင်လေးပဲ'ဟု သဘောတကျ ပြောကာ ပါးပြင်ကို တစ်ချက်ဖျစ်ညှစ်၏။ မွေ့ယာပေါ်အသာလှဲ လျောင်းအနားယူတော့ 'KIRA' က ရိုးရာအားဖြည့်ဆေးတစ်ခွက် တိုက်သဖြင့် သောက်ကြည့်လိုက်ရာ တစ်ကိုယ်လုံးပူရှိန်းပြီး နွေး သွားသလို ခံစားရပါသည်။ ကျွန်တော့် မျက်ခွံများလေးလာပြီး အိပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာသည့်အခါ စိတ်ချလက်ချအိပ်ပါ၊ နောက် တစ်နာရီလောက်မှ ပြန်ပြီး ပျော်ကြတာပေါ့ တဲ့ 'KIRA' က။
ရေတွေအပြည့်ဖြင့်ပြည့်နေသော အခန်းတစ်ခုထဲ ကျွန်တော် လွင့်မျောနေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်ရောက်နေလည်း ဘာလည်းဆို တာမသိ။ ဟိုသည်စီးမျောရင်း ရုတ်တရက် နံရံမှာ မှန်တစ်ချပ်၊ မှန်ထဲမြင်ရသည်က မိန်းမလိုဝတ်ထားသော ကျွန်တော်။ ဘာဖြစ်သွားတာ လည်းဟု လန့်ဖြန့်ကာ မျက်စိကို မှိတ်လိုက်မိတော့ ရေစီးထဲမျောပါသွားသလို လွင့်မျောသွားရ သည်။
မှိတ်ထားသည့် မျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်တော့ 'KIRA' က ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ဖက်ထားရင်း ပြုံးကြည့် နေသည်ကို တွေ့ရတော့မှ အိပ်ပျော်သွားလိုက်မှန်း ပြန်သတိရ မိ၏။ ထူးဆန်းသားပင် အားအင်မကုန်ခန်းသေးပဲ နောက်တစ် ပွဲနွှဲဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေ သည်မှာအမှန်။ သူ့မျက်ဝန်းရီဝေေ၀ တွေက ကျွန်တော့်ကိုညှို့နေသည်လား၊ သူ့ကြင်နာမှုတွေက တိမ်းမူးစေသလားမသိ ရင်ခွင်ထဲ နူးညံ့ စွာငြိမ်သက်ရင်း သူ့ ဆန္ဒများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်မိသည်။
ပန်းသွေးရောင် သူ့နှုတ်ခမ်းများက ထူအမ်းအမ်းလေးဖြင့် နမ်း ချင်စဖွယ်။ မျက်ဝန်းများက ရွှန်းလဲ့ပြီး ညို့နေသည်။ ဟင့်အင်. ...ငြင်း ဆန်မိချင်သည် သူဘာကိုလုပ်တော့မည်ဆိုတာကို။ ဒါပေမဲ့ ဖီးလ်....အဲဒီဖီးလ်ကရော ဘယ်လိုများလည်း စမ်းသပ် ချင်မိပါသည်။
ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို သူသိသည်...မော့ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော့်နှုတ် ခမ်းပါးကို နူးညံ့စွာ...ပြီးမှ တက်မက်စွာ သူနမ်းသည်။သူ့လက် ဖ၀ါး နုနုညံ့ဖြင့် ကျွန်တော့်ပေါင်တံ၊ ရင်အုပ်၊လည်တိုင်များကို ပွတ်သပ်ချော့မြူသည်။ နှုတ်ခမ်းထူထူလေးတွေက ကျွန်တော့် နားရွက်ဖျားဆီ အရောက် လျှာဖျားလေးကိုထုတ်ကာ နားဝက အသီးလေးကို ကလိသည်တွင် ကျွန်တော် တွန့်တွန့်လူး။ ပွတ် သပ်မှုကြောင့် ထောင်ထ နေသော နို့သီးခေါင်းကလေးများကို သူ၏လက်ညှိုးနှင့်လက်မတို့ဖြင့်ညှပ်ကာ တရွရွဖြင့် မသိမသာ ကလိပြီး ဆွဲဆွဲပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ထိုမှတဖန် နှုတ်ခမ်းများ ဖြင့် အသာအယာငုံ၍ စို့ပေးလိုက်သေးသည်။ လက်တစ်ဖက် ကလည်း ချောဆီကိုစွတ်ကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ဖြည်းဖြည်း ချင်း တွင်းချဲ့နေလေသည်။
'KIRA' က အဲဒါတွေကို တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နေတော့ ကျွန်တော့်မှာ မရိုးမရွတဆတ်ဆတ်တုန်ခါလာတော့သည် တစ်ကိုယ်လုံးလေ။ တစ်စုံတစ်ခုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုလား လာရသည့်ပမာ ပါးစပ်တွင်းမှ တံတွေးများကို တဂွတ်ဂွတ်မြို နေရသည်သာမက 'ဟင်း....ဟင်း' ဟူသော မပွင့်တပွင့် အသံ ကလေးများထွက်လာရသည်အထိ ညည်းညူမိလေသည်။ မျက် စိမှိတ်ရင်း မိန့်မူးနေသော ကျွန်တော် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက် တော့ တက်မက်နှစ်သက်သော မျက်လုံးများဖြင့်ပြန်ကြည့်နေ သော 'KIRA' ကိုတွေ့ရသည်ပေါ့။ ' အ' ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို ပူနွေးမာထောင်နေသော အသားတောင့်တစ်ခုက လာရောက် ပွတ်သပ်ခါ ထိတွေ့လိုက်ပြန်သဖြင့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ကြောက် စိတ်ရွံ့စိတ် ကလေးများရှိနေသော်လည်း 'KIRA'၏ပြုစုမှုက ဘယ်လိုလည်းဆိုတာ သိချင်စိတ်ဖြင့် အသာငြိမ်နေမိတော့ သည်။
ဤကဲ့သို့ ဒစ်မြုပ်ရုံမျှ လေးငါးကြိမ် ခြောက်ကြိမ်သွင်းချီထုတ်ချီလုပ်ပေးပြီးမှ တဖန်ဆက်လက်၍ ဖိအားပေးပြီးသွင်းလိုက်ရာ ကျွန်တော့်မှာ 'အင့်...အား...အ' ဟူသော အသံထွက်လာရပြီး ကိုယ်ပေါ်သို့ခွ၍ထောက်ထားသော 'KIRA' ၏ လက်မောင်းများ ကို တစ်ဖက်စီ အားရပါးရ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတော့သည်။ ခါး အောက်မှာ ခုထားသော ခေါင်းအုံးအမြင့်ကြောင့် ကျွန်တော့် တင်ပါးများမြောက်နေကာ အဆင်ပြေပြေ အောက်က နေနိုင် လေသည်။ ဗိုက်ထဲတစ်မျိုးပဲ....၀မ်းသွားချင်သလိုလို ဟိုဟာဖြစ် ချင်သလိုလို အီလည်လည်နဲ့။ အတွေ့အကြုံမရှိ ကျွန်တော့်အ ဖြစ်ကို 'KIRA' က သိဟန်တူပြီး ကြပ်သိပ်မှုကို သဘောကျနေ ဟန်တူသည်။ -ီးတံတစ်ဝက်မျှသွင်းပြီး သွင်းလိုက်နှုတ်လိုက် ဖြင့် လုပ်နေရာမှ 'KIRA' မှာ တဖြေးဖြေး နှင့်သွက်လာပြီး နောက်ဆုံးတွင် -ီးတံအဆုံးဝင်သွားအောင် တထစ်ချင်းဖိ၍ဖိ၍ သွင်းလိုက်လေ သည်။ 'KIRA' ဖိသွင်းလိုက်သည့်အခါတွင် ကျွန်တော့်မှာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲဖြစ်သွားရပြီး သူဟာကြီး ကြောင့် နာကျင်သွားရသလို ပြောမပြ တတ်သည့် အထိအ တွေ့အရသာ ခံစားမှုများကလည်း ပြိုင်တူလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာရသ ဖြင့် အံကလေးကိုကြိတ်၍ ကြိတ်၍ မှိတ်ခံနေလိုက်ပါတော့ သည်။
သူ့ဆောင့်ချက်များကြောင့် တစ်ခါတစ်ခါ လန့်ပြီးညှစ်ပြုမိသည့် ဖင်ကြွက်သားများကို သူသဘောကျနေသည်။ တစ်ချက်ခြင်း ဆောင့် လိုးနေရာကနေ အရှိမြှင့်ကာ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့် တော့သည်။ အဆုံးထိဝင်သွားလိုက် ထွက်လာလိုက်ဖြင့် ရှိနေ ရာက ရုတ်တရက် ဖိသွင်းလိုက်သောအခါဝယ် ထွားလှသော -ီးတံကြီးအရင်းထိဝင်သွားသည်မို 'အား..ကျွတ်ကျွတ်'ဟု အသံ ထွက်အောင် ငြီးငြူရင်းမှ ၏ရင်ဘတ်ကို ကျွန်တော်က လက်နှစ် ဖက်နှင့်ဆီး၍ တွန်းထားလိုက်မိရသည်။
'ဟင့်အင်...ခဏလေးဆက်လုပ်ပေးပါဦး မချွတ်နဲ့ဖြေးဖြေးလုပ် ပေါ့'
အတွေ့အကြုံမရှိ ချောဆီကြောင့် အဆင်ပြေနေပေမယ့် နည်း နည်းပြဲသွားလောက်ပြီထင်ရဲ့။ နာကျင်မှုထက် အရသာက ပိုမို လွန်ကဲလာ သည်မို့ 'KIRA' ကို ဆက်လက်၍ -ိုးပေးရန် ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်သည်တွင် 'KIRA' မှာ ဘယ်လိုမှ ဆုတ် ဆိုင်းမနေတော့ဘဲ အဆုံးစွန် သော စခန်းသို့ရောက်အောင် ခပ် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေးရင်းနှင့် -ိုးလိုက်သောကြောင့် ကျွန်တော့် မှာ ဘယ်ညာလူးလိမ့်ရင်း 'တအင်းအင်း .... တဟင်းဟင်း' ဖြင့် ငြီးငြူရင်း 'KIRA'၏ကျယ်ပြန့်သော ကျောပြင်ကြီးကို သိုင်းဖက် ၍ အလိုက်သင့်မျောနေမိသည်။ ကျွန်တော့်ကို ခွကာ အားရပါးရ -ိုးနေသော 'KIRA' ၏ ဆောင့်ချက်များမှာ သွက်သထက်သွက် လာပြီးနောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကာ အဆုံးထိ တစ်ချက် ဖိ သွင်းရင်း ငြိမ်ကျသွားလေသည်။
နှစ်ဦးသား အိပ်ယာပေါ်အတူလှဲလျောင်းအနားယူကြပြီးနောက် ခဏအကြာမှာ သူ လူးလဲထပြီး ရေချိုးခန်းဆီထွက်သွားသည်ကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကျန်နေခဲ့သည့် သုံးပြီးသွားသော ကွန်ဒွန် များကို အမှိုက်ပုံးထဲ သေချာသွားထည့်ပြီးနောက် ခဏအိပ်ယာ ပေါ်ဆက်လှဲနေ လိုက်ကာ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့လည်း တဘက်ကြီးတစ်ထည်ခါးမှာပတ်ကာ သူ့နောက်လိုက်သွား ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ခေါ်သံကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ရေချိုး ခန်းထဲဝင်သွားလိုက်သည့်နောက်မှာ 'KIRA' တစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီး ကြီးဖြင့် ရေပန်းအောက်တွင် ရေချိုးနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပါသည်။ သူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကိုလည်း ဆပ်ပြာဖြင့် ပွတ်တိုက်ဆေးကြောနေ သည်မှာ မွှေးကြိုင်လို့ပါ။
ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့် ကြည့်နေမိရင်း ရေပန်းအောက်ကို ကျွန်တော်လည်း ၀င်လိုက်ပါသည်။ အေးမြသောရေကြောင့် ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာ စောစောက ပင်ပန်းထားခဲ့သမျှ လန်းဆန်းသွားပါသည်။ ထိုထက်ပိုသည်က 'KIRA' မှာ မွှေး ကြိုင်သော အမြှုပ်များသော ဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ကျွန်တော်၏ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ဆေးကြောပေးသည်မှာ အထူးကျေ နပ်ဖွယ်ပင်။ သူ့လက်များဟာ ပွတ်သပ်ရုံ မဟုတ် ဆပ်ပြာမြှုပ် များဖြင့် ချောမွတ်နေသော ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးကို လည် တိုင်၊ကျောပြင်၊ရင်အုပ်၊ပေါင်များပါမကျန် အကြောကိုချက်ကျ လက်ကျထိအောင် နှိပ်နယ်ပေးတော့သည်။ သူ့ပြုစုမှုများက တာဝန်ကျေမဟုတ်မှန်း သိလာရသည်။
'ကောင်လေး....မင်း ဂျပန်က မပြန်ခင် ကိုယ်တို့အပြင်မှာတွေ့ ရအောင်လား? ဒီကိုမလာပါနဲ့တော့
ပြတင်းကမြင်နေရသော မီးရောင်စုံဖြင့် လှနေသော မြို့ကြီးကို ကျွန်တော်ခဏငေးမောမိပြီးနောက် ဆက်မငေးမိတော့ဘဲ အိပ် စက်ဖို့ စဉ်းစားမိလိုက်သည်။ ညဉ့်အတော်နက်ပြီ မဟုတ်ပါ လား။ 'KIRA' ကတော့ မွှေ့ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းရင်း ကျွန်တော့်ကို ပြုံ့းကြည့် နေသည်။ နှစ်သက်တာလား ကြိုက် သွားတာလားမသိသော အာသာဆန္ဒပြည့်ဝသည်ဟု ခံစားရ သွားမိသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသွား သည်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာမှမတွေးချင်ပါ။ လက် ကမ်းကြိုနေသော 'KIRA' ရဲ့ ရင်ခွင်နွေးနွေးထဲ ကျွန်တော် ဒီည အိပ်စက်တော့မည်။ လာမည့် မနက်ခင်းများဟာ ကျွန်တော့်အ တွက် အဆင်ပြေသော လာခြင်းကောင်းသော အရာများ သယ် ဆောင်လာမည်ဟု မျှော်လင့်မိသည်လေ။
မွှေးမြသော ကိုယ်သင်းနံ့လေးရှိထဲရင်ခွင်ထဲ နွေးထွေးလုံခြုံ စွာ....ပြီးတော့ နှစ်လိုစွာ ကျွန်တော် လှဲလျောင်းလိုက်သည်... ဒါကျွန်တော့်အတွက် သင့်တော်သည်ထင်ပါရဲ့...
စာကြွင်း ။ ။ အွန်လိုင်းဘော်ဒါတစ်ယောက် ဂျပန်သွားလည်တာကိုမြင်ပြီး တင်ခဲ့ဖူးသောဝတ္ထုလေးကိုသတိရတာကြောင့်ပြန်တင် လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းများပြန်တင်လို့ စိတ်မရှိကြပါနဲ့နော် အသစ်ရေးဖို့ အချိန်ပေးပါ့မယ်။